Mogadishu Journal » 2021 » April » 30
Fadeexadda gidaarrada guriga Ra’iisul Wasaaraha, mushkilad hareysay mustaqbalka Boris Johnson. Yaa markii ugu horreysay billaabay bixinta kharashka dayactirka apartamentada Downing Street ku taal? Su’aashaas Boris Johnson waa uu diiddan yahay in uu si saraaxad leh uga jawaabo,...
Dr. Mutlaq Al-Qahtani oo todobaadkan ku soo wajahan magaalada Muqdisho
Ergay gaar ah oo ka socda dalka Qatar ayaa la filayaa inuu toddobaadka dambe booqasho ku yimaado Soomaaliya. Ergaygan gaarka ah ayaa lagu magacaabaa Dr. Mutlaq bin Majed Al-Qahtani waxaana uu ku magacaaban yahay ergayga gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda Qatar u qaabilsan...
Biriq dad ka badan 30 qof ku waxyeeleysay dowlad degaanka Soomaalida
Waxaa uu intaas ku daray in gaariga gudoomiyaha oo xawaare sare ku socda uu afka u soo galay kontrolka ay joogeen ciidamada amaanka taasna ay sababtay in ciidamadu ka shakiyaan rasaas ooda kaga qaadaan. Iyadoo Geeska Afrika ay dhowaan ka curteen roobabkii xiliga Gu’ga ee sanadkan...
Xanta ayaa leh: Everton ayaa 35m ku dooneysa laacibka Barcelona Coutinho
Everton ayaa ku mashquulsanayd suuqa kala iibsiga muddooyinkii ugu dambeeyay waxayna isku diyaarinaysaa inay mar kale soo baxdo. Toffees, oo uu hogaaminayo labo jeer ku guuleystaha Champions League Carlo Ancelotti, ayaa keensaday James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure iyo Allan...
Accident occurred as tens of thousands of mainly ultra-Orthodox Jews were participating in an annual event for a religious scholar. A stampede at a religious festival attended by tens of thousands of ultra-Orthodox Jews in northern Israel has killed at least 44 people and injured...
Guddoomiye Cumar Shiikh Shafaana oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dil
Guddoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskuday dil oo isaga lagu qaarajin rabay ka dib weerar ka dhacay degmadaas. Waxaa uu intaas ku daray in falkan ay ka dambeeyeen ciidamada milateriga Soomaaliya ee fariisinka ku leh degmada Baraaw...
(Sawirro) Ku dhowaad konton qof oo ku geeriyootay kulan diimeed ka dhacay Israel
Dad fara badan qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacday xaflad diimeed ka socotay degaan ku yaalla waqooyi bari Israa’iil sida ay sheegtay heyada Adeegga gurmadka degdegga ah ee Israa’iil. Wargayska Haaretz ayaa sheegaya in ugu yaraan 44 qof ay dhimatay iyadoo adeegyada gurmadka...
Taliyihii Ciidamada Mucaaradka ku biiray oo xilka laga qaaday iyo taliye cusub oo lagu bedelay
Taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka booliiska saldhiga degmada Shabis Farxaan Jaray, oo dhawaan ku biiray ciidanka mucaaradka ee kasoo horjeeda mudo kororsiga dowlada. Wareegto kasoo baxday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya...
Al Shabaab oo ka hadashay Dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho
Xarakada Al Shabaab ayaa ka hadashay dagaaladii dhawaan qeybo kamid magaalada Muqdisho ku dhax maray Ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya iyo ciidamada taabacsan Musharaxiinta mucaaradka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu magacaaban Al Shabaab Sheekh Muuse Cabdi Caraale ayaa...
Muqdisho:-Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in maamulka Gobolka Banaadir iyo kan maamulka degmada Wardhiigley ay si hoose ganacsato uga iibsadeen kawaanka hilibka iyo suuqa xoolaha ee degmada Wardhiigleey. Dhulkan la iibiyay oo ka kooban 19-boos ayaa kuyaala...